Kuyinto enomdla ngakumbi ukufumana kwaye ngokukodwa ukunika izipho kwiphakethe enhle yokuqala. Unako, ngokuqinisekileyo, ukupakisha imali kwivenkile. Kodwa kungcono ukupakisha isipho ngokwakho, ngokutyalombela inxalenye yomphefumlo wakho kwinkqubo. Isithsaba sokuphoqa isipho siya kuba ngumgca wephepha lombala. Ngendlela, izindebe zinokubhenela amakhadi okubulisa, uwasebenzise njengemveliso yefashini, isicelo kwiitafile, ukuhlobisa ngaphakathi. Makhe sibone indlela yokubopha isaphetha sephepha kwiindlela ezahlukeneyo ezilula nezicace.
Indlela yokubopha isaphetha sephepha eliqhelekileyo
Sithatha isitifiketi sephepha lesipho malunga no-1 cm ububanzi kwaye sinqumle isiqwenga sama-50 cm. Ukususela kumgca omnye wephepha lephepheni sibuyela kumitha angama-5-7 kwaye siyifake iteksi ngesimo semicircle ("iso"). Isalathisi eside singagqitywa.
Ngeeminwe ezimbini sibambe isiseko se "indlebe", kwaye ukuphela komde wephepha lephepha kuhlanganiswe ngetekisi - siyifaka phakathi kwesaphetha. Ephakathi, sidonsa i-"eyelet" yesibini - sifanele sifumane isaphetha, njengesihlangu esikhwameni. Izindebe zingagcini!
Ngoku qaphela ubungakanani bomnsalo ogqityiweyo. Bamba okanye uvalise iindlebe kwisayizi efunwayo. Kufuneka ukuba usebenze ngokucophelela. Nangona iphepha lesipho lihlala lihlala lide, lisezinyembezi.
Ngokomgaqo, isaphetha sephepha esilula silungile. Ekugqibeleni, i-nodule inganyaniswa okanye iqiniswe. Ukwenza isaphetha sibonakale singumntu, iziphelo eziqhekezayo zicatshulwa kwi-1-2 cm ubude kunokuba iliso liyilo. Xa ukuhlobisa, iindlebe zesaphetha zifakwa phezulu. Kwaye ukusuka ngasezantsi kwii-angles ezilungileyo ukusuka kwelinye iinye iiphelo ezingenahla.
Ukuba usebenzisa iphepha elilodwa lokupakisha iphepha, iziphelo ziyakushiywa ngaphezulu. Emva kokubunjwa kwesaphetha, kucetyiswa ukululalisa iiphelo phakathi kwesithupha kunye nommese-i-tape iya kuguqulwa ngenyameko emnandi.
Isiqhelo esifanayo sibonakala silula. Ukubukeka kancinci kakhulu kabini (kathathu, njl.). Ukufumana isaphetha esiphindwe kabini, emva kokubunjwa kweqhosha lokuqala lomgca ukuze uqine (glue) ayimfuneko. Ngokuchasene noko, kufuneka kube lula. Emva koko unako ukwenza kwifom yesibini kwicala ngalinye, ubambe itekisi yephepha ngaphakathi kwinqanaba. Kulungele ngakumbi ukusebenzisa i-piece ye tape. Kwaye ukuba isaphetha sinemibala, sincoma ukusebenzisa ierbhoni zamaphepha emibala emibili.
Indlela yokubopha ibhotela yomnsalo
Uza kufuna ezimbini zeephepheni zamaphepha: enye inkulu-3 cm, isibini encinci (ibhola e-gonflable ibopha). Sinqumle iteksi ebanzi imitha nesiqingatha. Yifake kwisiqingatha. Ukusuka ngaphakathi kwendonga, sibamba iqhosha elincinci elincinane kwinqanaba eliphakathi kwerbhoni ebanzi. Ngenxa yoko, siya kuthi sizenze ukuqokelela isaphetha.
Iingwele zingaphonsa i-bend ngendlela yesipiramidi esithiniweyo. Okokuthi, imida iya kunqunyulwa, kwaye phakathi kwidbhoni iya kufakwa. Ukuqinisekisa ukuba irayoni encinci ayigciniweyo, inokuqulunqwa kunye ne-stapler kwisiseko se-cut.
Emva koko, ukususela kwi-bend point, ihlobo kufuneka lihlulwe libe ngamacandelo amane: i-9-9-13-14 cm. Kumida yale macandelo, silungiselela iteksi ebanzi kwimigca ye-sloping ne-stapler: ukusuka phezulu ukuya phezulu-ukusuka phezulu ukuya phezulu-ukusuka phezulu ukuya phezulu-ukusuka phezulu ukuya phezulu. Kuvela uhlobo lwe-trapezoid. Ukwenza isaphetha sijikeleze, i-bevel yokuqala yenziwe ngenyameko xa kuthelekiswa nezo zintathu zilandelayo. Iyona nto ibaluleke kakhulu: nganye yamacandelo amane kwipaneti enkulu ichaneke kunye nezicatshulwa ezimbini. Kule meko, ibhondi encinci ayifanele idlule ngokukhululekile phakathi kwabo (ngoko ke iteksi ephambili kufuneka ibe bubanzi).
Ekugqibeleni, ihlala idonsa ibhande elincinci kwaye iqoke isaphetha ngefubhathane. Imisila yesaphetha inokuthi ithwetshwe ngeesisisi, idibanise kwimichilo emincinci, ukuyigqitha ngokomfanekiso.
Indlela yokubopha intyatyambo yentsimbi
Isaphetha esihle kakhulu, kwaye emva kokusebenza okumbalwa ngokukhawuleza ngokwaneleyo. Cinga ukhetho, xa kungekho tape ekhethekileyo yephepha. Thatha iphepha owalithandayo kwaye unqumle imichilo: 4 iingcezu ze-10x1.5 cm; Iziqhekeza ezine-12.5x1.5 cm; Iziqwenga ezine-15x1.5 cm.
Ngoku, umgca ngamnye uhlonywe nge-eyelet ("eyelet"), kwaye iiphelo zihlanganiswe ndawonye. Fumana iipalali eziyi-12.
Amathangi ahlanganisiweyo obungakanani obufanayo ngokulandelelana ngendlela yeentyatyambo kunye neepalini ezine kwaye ubambane bonke phakathi. Uya kufumana iintyatyambo ezintathu zobukhulu obuhlukeneyo.
Ekugqibeleni, sibeka iintlobo ezintathu zeentyatyambo zibe nye njenge-matryoshka - encinci ibe yinto enkulu, kwaye uyibeke ndawonye. Kule meko, iipalali zecandelo elincinci (elincinci) limele libekwe ngokulinganayo phakathi kweepalali zecandelo elincinane - isaphetha sephepha siphezulu kakhulu. Umgangatho ungabhenkiswa nge-ringlet eyongezelelweyo, iintambo ezinemibala ngesimo se-stamens, okanye nayiphi na indawo yokufumana. Ngendlela, ama-halves akakwazi ukukhonjiswa, kodwa agqitywe ngeqhosha elihle.
Roach kwi sauce lemon
Yintoni engcono ukukhetha inkomfa ekhitshini?
Indlela yokwenza ikhadi ngokwakho ngoFebruwari 23?
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - owesifazane uDeva - waseTamara Globa no-Angela Pearl